Motorola Moto X 2014, Dib u eegista | Androidsis
Mar labaad mahadsanid deeqsinimada iyo karaamada leh Motorola Spain, iyo si gaar ah saaxiibkaba Víctor, maanta waxaan kuu soo qaadan karnaa dib u eegis muuqaal oo dhameystiran iyo gunaanadkeenna ku saabsan dhammaan wanaagga iyo xumaanta muxuu cusub na siinayaa Motorola Moto X 2014, shaki la'aan mid ka mid ah terminaallada keenaya dareen maanta goobta Android.
Terminal aad loo rajeynayo iyo in sida aan ku arki karno dib u eegista fiidiyowga, Waxay leedahay qaar ka mid ah qeexitaannada farsamo ee ugu goynta badan, laga bilaabo processor-kaaga Qualcomm Sanpdragon 801 afar geesle iyo xawaare saacad ugu badnaan ah 2,5 GhzIyadoo GPU Adreno 330 taasi waxay na siineysaa waxqabad sare xaga garaafyada, ku haboon toogashada cayaaraha ugu baahida badan; xitaa iyada oo loo marayo xusuusta kaydinta, iyada oo lagu xisaabtamayo nooc ka mid ah 32 GB xasuusta gudaha kulligoodna xusuus 2Gb RAM taas oo in kabadan ugu filan khibrad isticmaale siman oo xasilloon xitaa la shaqeynta barnaamijyo badan oo ku shaqeeya asalka.
1 Dhameyso iyo naqshadeynta
2 Interface user
3 Kaamiro iyo warbaahin badan
4 Kaydinta iyo ismaamulka
Dhameyso iyo naqshadeynta
Marka laga hadlayo qaabkeeda, waxaan helnaa terminal miyir-qab leh oo xarrago leh, oo ku dhammaaday bir iyo laba ikhtiyaar oo lagu kala xulan karo midab ahaan, awoodna u leh in aan mid dooranno nooc cad sida midka aan ku aragno fiidiyowga, iyo a nooc madow. Dhamaantood waxaa lagu habeyn karaa bogga Motorola ee leh arjiga Moto Sameeye, Kaas oo aan uga habeyn karno terminaalkeenna 'Moto X 2014' gebi ahaanba, taas oo ka dhigeysa mid gaar ah oo aan dib loo soo sheegi karin. Haa, maskaxda ku hay in adeegani uusan wali gaarin dhulalka Isbaanishka.
Ku saabsan tayada guddigaaga 5,2 ″ dhexroor amoled iyo xallinta FullHD, waxaan kuu sheegayaa aniga shaqsiyan inay tahay qiyaasta saxda ah si aan u sii wici karno taleefoonada casriga ah oo aanan u baahnayn inaan u adeegsanno magacyo sida Faleebo.
Marka laga hadlayo adeegsadaha isticmaalaha, in la yiraahdo go'aanka Motorola ee ah a Nooca Android 4.4.4 si toos ah, runtii waa guul weyn tan iyo wuxuu hagaajiyaa waxqabadka iyo dheecaanka xarunta, marka laga reebo inaad awood u leedahay inaad hesho cusbooneysiinta nooca cusub ee muddada dheer la sugayay ee Android L, kaasoo si ficil ahaan ah u dhacaya, dhowr maalmood uun ka dib marka la helo baaxadda Google Nexus.
Kaamiro iyo warbaahin badan
Ilaa iyo inta kamaradda ama kamaradaha qaybta Moto X 2014 cusub ay khuseyso, waa inaan dhahno, inaan daacad u ahaano ugu yaraan marka la eego kamaradda gadaal ee 13 megapixel. taas oo nasiib daro aan aheyn mid ka mid ah xooggeeda, halkii laga soo horjeedey maadaama aan leenahay kamarad isku xirnaanta sida ugu fudud ee aan qiyaasi karno, maqnaanshaha xulashooyinka qaabeynta gacanta, qaabka muuqaalka ama hawlo badan oo qalabkani badanaa leeyahay Android-sare.
Dhinaca 2 Kaamirada hore ee Megapixel qaraarka si gaar ah loogu talagalay sawirrada iskaa wax u qabso, ayaa kuu sheegaya in ka duwan kaameradda dambe, ay na siineyso in ka badan tayo ku filan oo aan ku qaadanno sawirro jilicsan, qaar sawir-qaadisyo ballaadhan oo ay ugu wacan tahay saameynta xagasha ballaaran loo isticmaalaa in lagu qaado sawir badan marka sawirka la qaadayo.
Qeybta warbaahinta badan waxaan ku aragnaa kooda laba afhayeenka hore taasi waxay noo fidisaa a tayo aan caadi aheyn oo dhawaaq maqal ah, iyada oo la siinayo bilic aad u qurux badan oo dhammaynaysa.
Kaydinta iyo ismaamulka
In kasta oo xagga kaydinta gudaha aan haysanno laba nooc, mid noo muuqda mid caddaalad nagu ah. 16 GB oo ah keydinta gudaha, iyo nooc kale oo ah 32 Gb, waxaan aaminsanahay inay tahay xishood dhab ah ama guuldarro culus, ha ku darin qalabka keydinta ee dibadda sida kaarka haysta microSD, iyo inkasta oo aan ognahay inay la jaan qaadi karto USB-OTG, dadka isticmaala badankoodna dib ayey u yara jiidaan.
Dhinaca kale ee taban, ugu yaraan mudnaanta, waxaan awoodnay inaan ku aragno awoodda batteriga, oo ugu dambeyntii ku sii jira 23 oo mAh ah aad uga fog terminaalka sida Xusuusin 4, Galaxy S5 ama LG G3 oo ina siiya baytariyada ku xeeran dhammaan kiisaska 3000 Mah. In kasta oo ay caddaalad tahay, waa in la sheegaa in celcelis ahaan loo isticmaalo terminalka, cusub Moto X 2014 wax dhibaato ah kalama kulmin inuu dhammaystiro maalin shaqo oo dheer isagoon u adeegsan xeedho USB ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Waxaan si buuxda u tijaabinay Motorola Moto X 2014
Waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin dheeraad ah ka bixiso batteriga, oo ah waxa aniga aad ii xiisaynaya, fadlan !!!!
Adeegsiga, saacadaha shaashadda, iskuduwaha barnaamijyada ...
Fiidiyowga sifiican ayaan u sharaxay, waxaan faallo ka bixiyay celcelis ahaan isticmaalka terminaalka inuu gaari karo 24 saacadood oo madax-bannaanida oo leh qiyaastii laba saacadood oo shaasha ah, haddii aan siino bakoorad dheeri ah, oo ku saabsan 16 18 saacadood oo u dhexeysa saddex iyo afar saacadood oo shaashad ah.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah Taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan maanta, haddii uusan ugu fiicnayn. Waa mid aad u dhameystiran, in kasta oo aan sidoo kale u maleynayo in waxqabadka batteriga xoogaa yar yahay, laakiin kaalay, waxaan u baranay inaan maalintii oo dhan la qaadanno taleefanka gacanta gacanta, badanaa kiiskeyga. Waxaa laga yaabaa in tani wax badan ku horumarin doonto mashruuca lollipop-ka cusub ee Google ee Google, in kastoo aanan xasuusan karin waxa loogu yeero. Sikastaba, muujinta aad ufiican, salaan!